विश्वकै सबैभन्दा खतरनाक भाइरस मरबर्ग भटियाे; नाक,आँखा कानबाट रगत निस्कने र उच्च मृत्युदर हुने ! – Sandesh Press
विश्वकै सबैभन्दा खतरनाक भाइरस मरबर्ग भटियाे; नाक,आँखा कानबाट रगत निस्कने र उच्च मृत्युदर हुने !
August 15, 2021 172
पश्चिम अफ्रीकी दृश गिनीको स्वास्थ्य प्रशासन एकदमै कडा चु-नौतीबाट गुज्रीरहेको छ । एकदमै खत- र-नाक मानिएको मरबर्ग भाइरसका कारण एक ब्यक्तिको मृ -त्यु भइसकेको छ । यसैबीच उक्त देशको आधिकारीक स्वास्थ्य बिभागले हालै
१५५ जना ब्यक्तिलाई मनिटर गरिरहेको खबर रहेको छ । उनीहरु ति मृ- तकको सम्पर्कमा आएका ब्यजक्तिहरु रहेको बताइएको छ । यो भाइरस अहिले बिश्वकै सबैभन्दा ख -तर-नाक भाइरसको रुपमा आएको छ । यो भा इरस संक्रमीत हुनेको मृ -त्युदरको संख्या ५० प्रतिशत रहेको थियो ।
तर हाल आएर मृ-त्युदरको संख्या ९० प्रतिशत पुगेको छ । यस भा -इरसको लक्षण इ-बो-ला को जस्तै रहेको छ । यो पहिलो पटक गिनीमा देखिएको हो । यो पहिलो पटक पश्चिमी अफ्रीकामा देखिएको हो । जति पनि ब्यक्तिहरु यस भा- इरस लागेर मृ -त्यु भएका ब्यक्ति संग सम्पर्कमा आएका थिए उनीहरुलाई ट्रेस गर्न सुरु गरिएको छ ।
अहिले सम्म ति ब्यक्ति संग सम्पर्कका आएका १५५ जनालाई आइसोलेशनमा राखिएको छ । बिश्व स्वास्थ्य संगठनले गिनी गणराज्य प्रशासनलाई उच्च सर्तकता अपनाउन चे-तावनी दिईसकेको छ । यो भा- इरस बाट पीडित ब्यक्ति जम्बी अर्थात भू-त जस्तै देखिन्छन् । उनीहरुको अनुहारमा कुनै भाव वा प्रतिक्रिया देखिदैन ।
त्यसको अरु लक्षण टाउको दुख्ने , पखा-ला लाग्ने, पेट दुख्ने , उल्टी हुने जस्ता लक्षणहरु देखिने गरेको छ । यो भा -इरस लागेको ५ दिन पछाडी बिरामीको आँखा, कान तथा मुख बाट र- गत आ -उने हुन्छ । अनि बिरामीको पुरै स्नायु प्रणाली नै न-ष्ट भई मृ-त्यु हुने गरेको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्युएचओले एकजना पुरुषको अत्यन्तै छिटो संक्रमित हुने मारवर्ग भा -इर सका कारण एक व्यक्तिको ज्या-न गएको पुष्टि गरिसकेको छ । विशेषगरी, फलफूल खाने चमेराबाट मानिसमा सर्ने गरेको बताइएको छ । डब्ल्युएचओले यो भा-इरस टाढा–टाढा व्यापकरूपमा फैलिने सम्भावना रहेको दाबी गरेको छ ।
काेराे-ना भा- ईरस (काे-भिड – १९ ) बाट बच्न सबैले सामाजिक दुरि कायम राखाैँ र साबुन पानिले मिचि मिचि हात धुने बानि बसालाैँ । जनहितमा जारी सन्देश ।। हाम्राे न्युजहरु हजुरहरुलाई कस्ताे लाग्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ
Prevकिन हुन्छ महिनावारी गडबढि ?
Nextतेल लगाउँदा यी गल्ती त गर्नु भएको छैन ? नत्र देखिनसक्छ कपाल झर्ने र टुक्रिने समस्या